GAROWE- Madaxweynaha Puntland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u dhoofay magalada Addis-ababa ee dalka Ethopia, isagoo sheegay inuu u tagayo arrimo la xiriira amniga, dhaqaalaha iyo xiriirka labada dhinac ka dhaxeeya.
Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, ayaa sagootin loogu sii sameeyay madaarka Canoco, waxaana safarkiisa ku wehelinayay xubno katirsan labada gole ee dowladda.
Mar uu lahadlay warbaahinta ayuu sheegay in safarkaasi salka ku hayo casuumad uu ka helay madaxda dalkaasi, isagoo sheegay inay kulamada ay qaadan doonaan diiradda lagu saarayo, la dagaallanka xagjirnimada, hormarinta dhaqaalaha.
“Maanta waxaan safar shaqo oo kooban ugu amba baxayaa waddanka Itoobiya, waxaana u aaday casumaad rasmi ah oo aan ka helay waddanka Itoobiya, waad ogtihiin oo Puntland iyo Itoobiya waxa ka dhexeeya iskaashi dhinacyada ganacsiga, Nabadgeliyada iyo la dagaallanka Xagjirnimad,”Ayuu yiri Madaxweynaha dowladda Puntland.
Maaha safarkii ugu horraysay ee madaxweyne Gaas ku aado dalka Ethopia, wuxuuna kusoo beegmay xilli shalay 15 Febrayo, uu soo magacaabay guddiga doorashooyinka KMG ah ee Puntland.
Madaxweynaha Puntland oo magacaabey Gudoomiyaha Maxkamada sare ee Puntland
Puntland 16.08.2016. 17:44
GAROWE- Maaxwyenaha Puntland Cabdiweli Maxamad Cali Gaas ayaa qoraal uu maanta kasoo saarey xafiiskiisa u magacabey Gudoomiyaha Maxamada sare ee Puntland Dr. Yusuf Xaaji Nuur.
Dr. Yusuf Xaaji Nuur oo badali doona Cabdul qaadir Axmad Maxamud oo muddo xilkaan h ...
Idaacada SBS Australia oo wareysi uu ka caroodey ka qaadey Madaxweyne Gaas [Dhageyso]
Puntland 28.03.2017. 14:39
​Puntland: Garowe goobo lagu qoray "Doonimayno 4.5"
Puntland 28.03.2016. 18:30
​Puntland: Shirka Wasiirrada oo Arrimo Kala Duwan Looga Hadlay
Puntland 07.02.2016. 18:22
​Ra'isal wasaaraha Somalia oo Garowe imaanaya
Puntland 23.03.2016. 18:37